झापादेखि कन्चनपुरसम्म उस्तै हो! | परिसंवाद
गफाष्टक आइतबार, कार्तिक ९, २०७७ मा प्रकाशित
आज नेपालीको महान चाड बडा दशैंको नवमी तिथी । यति खल्लो र विरक्त लाग्दो दशैं मैलेचाईं भोगेको थिएन । एकातिर कोरोनाले सबैलाई हायल कायल बनाएको छ भने अर्कोतिर उराँठ लाग्दो उपल्लो डोल्पाको बसाई ।
‘ए झुम्री अलिकति दाउरा ले त अगेनोमा हालौं !’
के पोल्छौ हौ बुढा अगेनोमा ! पोल्ने त केही पनि देख्दिन त !
पोल्ने सामान र अरु चिज लिएर तेरो गामबाट एउटा मान्छे आउँदै छ अरे । भिरघरेले त्यो मान्छेलाई यहीं तलबाटोमा भेटेको अरे । सँगै आउदै छन् । अहिले फोन गरेको थियो ।
ए… आमाले पठाई देको होला । छोरी ज्वाइँ दशैं मानुन भनेर । इ… आइ पुगी हाले ! ए जन्तरे बढी पो रान त ! भारी यता बिसाउ बढी !
नमस्कार है काका– काकी ! सन्चै छौ किन नाई !
ए भिरघरे अगेनोकै छेउमा आइजो होउ । आगो ताप्तै गफ छाँट्नु पर्छ । अनि भिरघरे भतिज । पूर्व झापादेखि पश्चिम कन्चनपुरसम्मको कैरन कह त हौ ।
के कहनु हौ काका ! झापाको काँकरभिट्टा नगरपालिकामा पनि राम्रो छैन । हल्दीबारी गाउँपालिकामा अध्यक्ष रविन्द्र अल्पमतमा छन् उपाध्यक्ष डम्मर बहुमतमा छन् बजेटसमेत पास भको छैन । अध्यक्ष राप्रपाको उपाध्यक्ष नेकपाको परे । हाम्रो काँग्रेस त रमिते ।
अनि त्यो सुरुङ्गा झापारोडको बिस्तारको कुरो चैं के भए छ ? मिल्यो कि मिलेन छ ।
हौ काका नेपाल हो । यहाँ जे पनि हुन्छ पहिला त्यही अदालतले ‘सार्वजनिक जग्गामा घर निर्माण गरेर सडक विस्तारमा बाधा पु¥याएको हुदा उक्त घर टहरा भत्तकाई सडक विस्तार गर्नु भन्ने निर्णय ग¥यो । अहिले त्यही अदालतले ‘दुवै पक्षलाई अदालतमा झिकाई निर्णय गर्ने’ भनि सुनुवाई ठोक्यो अरे ।
लु झापाको कुरो छोड् । अन्त के हुदै छ ?
के हुनु ! २ नं. प्रदेशका पालिकाहरुमा बजेट पास हुनु त परै जाओस् माथिबाट पठाएको राहात बाँड्न सक्ने हुत्ती समेत देखिएन । महानगरपालिका भन्छौ भने चितबन मनपरी छ । काठमाण्डौ तानातान छ । बरु रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले राम्रो काम गर्न खोजेको छ भन्छन् । नेपालगंज उपमहानगरपालिकामा पनि उस्तै छ । दार्चुला भन कि कन्चनपुर सबैतिरका पालिकाहरु गनाउन थालेका छन् ।
यता हाम्रो कर्णाली प्रदेशमा के भयो ? हाम्रो मुख्य मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पद धरापमा थियो जोगियो कि नाई !
जोगियो काका जोगियो । यमलाल कँडेलहर्ले वहिष्कार गरेछन् । नेकपा भित्रको जात्रा हेरेर हाम्रो काँग्रेसको जीवनबहादुर शाहीहरु खित्का छोडेर हाँस्तै थिए अरे !
अनि नेकपाको केन्द्रमा पनि निकै नराम्रो कालो बादल फेरि मडारिदै छ भन्ने हल्ला छ त !
हो नि काका ! जेट उडाउने दुईटा पाइलटले नेकपा नाम गरेको जाहाज कालो बादल भित्र हुलेको र त्यसमा सवार यात्रुहरु डराएको भनेर विष्णु रिजालले लेखेका थिए । तर, ओली हुनजेल डराउनु पर्दैैन ।
उता माधव नेपाल पनि फेरि पाखुरा सुर्केर अगाडि बढे भन्दै थिए त ।
कसले पाखुरा सुर्केको अरे बुढा !
माधव नेपालले अरे काकी ! काकालाई त आफ्नो नेता प्रचण्ड कहिले प्रधानमन्त्री बन्लान् र काठमाडौं गएर फुपुको श्राद्ध गरौंला भन्ने छ नि !
ए झुम्री तँ ओलीको पक्ष लिएर चैं नबोल है मेरो टुप्पीबाट धुवाँ छुट्छ ।
तिम्रो टुप्पीबाट धुवाँ छुटेर के गर्छौ । मान्छेको मुटु मक्कानिदा र पेट पोल्दा त केही नाप्पिएन । पाँच वर्षका लागि ओली त्यसपछि दुब्लो आश गर्नु पर्छ अरुले । पँखेटा विना उड्न खोजेर हुदैन बुढा ।
हेर्दै जा यही बिचमा के–के त हुन्छ–हुन्छ ।
खै काका होला जस्तो लागेन मलाई त ।
ओलीले ‘खुट्टी देख्दै पत्याएँ’ भने जस्तो छ माधव र प्रचण्डलाई । हुनु चैं लाष्टै निहुँ खोजाखोज गर्दै छ नेकपाहरु । लाष्ट किक हानेदेखि हाम्रो काँग्रेसलाई खुदो पल्टिने थियो ।
झिङ्गाको सरापले डिंगा मर्दैन भिरघरे । जनताले बुझेका छन् । सबैको मखुण्डो भित्र अर्कै अनुहार छ भन्ने कुरा ।
त्यो होइन काकी । नेपालगंजका मेयर राप्रपा भए पनि काँग्रेस नै ठिक भन्छन्, झापाका राजेन्द्र लिङ्देन पनि त्यसै भन्छन् । कहिले काही काठमाडौका राप्रपा नेता दमन बस्नेत हाम्रौ डोल्पाको छेदी गुरुङ्ग पनि काँग्रेस नै ठिक भन्छन् ।
हेर भतिज तैले नाम लिएका सप्पै गणतन्त्र विरोधी हुन । उनीहरु भरसक काँग्रेसलाई पनि गणतन्त्र विरोधी कित्तामा उभ्याउन सकिन्छ कि भनेर लागि परेका छन् । तिनार्को कुरा नपत्या । बरु काठमाण्डौमा ‘र’ को हाकिम आका थिए अरे भारतबाट । हाम्रा नेताहर्लाई के भनेर गए छन् । पत्रकारहर्ले त तमासै लेखेका छन् त !
काका पनि फेरि हाम्रा पत्रकारले लेखेको पत्याउँछन् । पत्रकारले त जे–जे नभाको त्यो त्यो लेखे ! विचरा प्रचण्डले त ‘मैले भेटेको छैन’ भनेर खण्ड नै गर्नु प¥यो । के वार्ता भयो ? किन आएका थिए भन्ने कुरा कि प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छ कि त्यही ‘र’ को हाकिमलाई । अरु त गफै हुन् ।
अनि हाम्रो पत्रकारले लेखेको विश्वास नै नगर्नु त भतिज ।
अनुमानको भरमा ‘होला तनि’ भनेर लेख्छन् । अनि के पत्याउनु । काका काकी ! अहिले म लागें घरतिर आज दशैैंको नवमी । यसो केही मिठो मसिनो बनाएर भुराहर्लाई खवाउनु प¥यो ।
लु जै नेपाल ।